Madaxweyne Farmaajo Oo Hadbalyo U diray Antonio Guterres. – STAR FM SOMALIA
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa dhambaal hambalyo ah u diray xoghayaha guud ee qaramada midoobay Antonio guterres, oo markii labaad dib loogu doortay inuu noqdo xoghayaha guud ee qaramada midoobay.
Madaxweynaha ayaa sheegay in dawladda Soomaliya soo dhowaynayso inuu markale Antonio guterres noqdo xoghayaha guud, sidoo kale na ay dawladdu si hagar la’aan ah u taageerayso.
Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres ayaa waxaa uu kamid yahay mas’uuliyiinta sarsare ee sida dhow ula Shaqeeya dowladda Soomaaliya, waxaana uu ka hadlaa xaaladda Soomaaliya.
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa Xafiiskiisa ku qaabiley Shir gudoonka Cusub ee Golaha Wakiilada Somaliland ee manta kusoo baxay doorasahdii ka dhacday magaalada Hargeysa.
Kulan uu la qaatay Gddoonka kadib ayaa Madaxweynaha Somaliland uu u hambalyeeyay, isaga oo sheegay in Maanta ay tahay malin taariikhi ah maadaama lagu guuleystay in ay si nabad ah ku dhacdo doorashada.
Waxaa uu sheegay in doorashadaan ay sidoo kale niyadjab ku tahay cadawga Soomaliland, waxaana uu ugu baaqay Guddoonka Cusub ee Golaha Wakiilada Soomaliland inay waajibkooda Shaqo si wanaagsan u gutaan.
Ugu dambeyn Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa u mahad celiyay xubnaha Cusub ee Golaha wakiilada Somaliland iyo cid kasta oo ka qeyb qaadatay inay si nabad ah ku dhacdo doorashada guddoonka Golaha Wakiilada Somaliland.
Xildhibaannada Golaha Wakiilada Somaliland ayaa waxaa ay kulankoodii ugu horreeyay ku yeesheen Magaalada Hargeysa, kaas oo ujeedkiisa ahaa doorashada Guddoonka Golaha wakiilada.
Doorashada Guddoonka Golaha wakiilada Somaliland ayaa waxaa ku tartamaya min Saddex Xubnood oo ka socda Xisbiyada Mucaaradka oo isbaheystay iyo Xisbiga Talada haaya ee Kulmiye, kuwaas oo ku kala tartami doona Guddoomiye, kuxigeenka 1aaad iyo labaad.
Kursiga Gudoomiyaha Golaha Wakiilada Somaliland ayaa waxaa ku tartamay Yaasiin Xaaji Maxamuud Faratoon oo ka tirsan Xisbiga talada haya ee Kulmiye iyo Cabdirisaaq Khaliif oo ka socda Xisbiyada mucaaradka.
Halka guddoomiye kuxigeennada 1aad iyo labaad ay ku tartamayaan min laba xubnood oo ka kala socda Xisbiyada Mucaaradka iyo Xisbiga kulmiye, waxaana doorashada Guddoonka Golaha wakiilada Somaliland ay tahay mid xiiso badan.
Xildhibaannada Golaha Wakiilada ayaa cod gacan taag ah uga kala codeeynayay musharixiinta guddoomiyaha Golaha Wakiilada Somaliland ee kala ah Yaasiin Xaaji Maxamuud Faratoon iyo Cabdirisaaq Khaliif.
Guddoomiyaha Maxkamadda sare ee Somaliland oo kulanka shir guddoominayay ayaa ku dhawaaqay natiijada codeynta, waxaana uu sheegay in Cabdirisaaq Khaliif uu helay 42 Cod, isla markaana uu noqday Gudoomiyaha Golaha Wakiilada Somaliland halka Yaasiin Xaaji Maxamuud Faratoon uu helay 39 Cod.
Guddoomiyaha Cusub ee Golaha Wakiilada Somaliland ayaa waxaa uu ka socda dhinaca Xisbiyada mucaaradka Somalland, waxaana uu tartan adag kala kulmaya xisbiga muxaafadka ah ee Kulmiye.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble oo kulan la qaatay Guddiga doorashooyinka Xildhibaannada labada gole ee Gobollada Waqooyi, ayaa sheegay in xubnaha guddiga laga doonayo in ay ka madax banaanaadaan siyaasadda iyo aragtida dhinacyada, ayna si siman ugu adeegaan dhammaan muwaadiniinta u tartamaya kuraasta ay doorashadooda hagayaan.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa xusay in laga noqday doorashadii ay dhowaan dhinacyada guddigu ku doorteen labada hoggaan, isla markaana uu Xafiiska Ra’iisul Wasaaruhu soo gudbin doono xiliga iyo goobta lagu qabanayo doorashada guddoonka guddiyada.
Eng. Rooble ayaa tilmaamay in masuuliyadda koowaad ee hufnaanta iyo la xisaabtanka guddiyada doorashooyinka ay isaga saaran tahay, isla markaana xubnaha guddigu ay ka fogaadaan wax walba oo baal marsan habraaca doorashooyinka ee lagu heshiiyey.
“Sida ku qoran wareegtadii la idinku soo magacaabay, waxaad ka madax bannaan tihiin cid kasta oo siyaasad ku jirta, sida uu qabo habraaca doorashada, waxaa la idin kaga fadhiyaa waajibaadkiina inaad u gudataan si daacad ah oo waafaqsan hufnaanta doorashada, wixii caqabad ah ee idinla soo gud-boonaadana waxaad ula soo laabanaysaan Ra’iisul Wasaaraha oo ah hoggaamiyaha doorashada”.
Ra’iisul Wasaaraha XFS Mudane Maxamed Xuseen Rooble, ayaa horey kulamo lagu xalinayo khilaafaadka ka dhashay hoggaanka guddiyada doorashooyinka Gobollada Waqooyi ee Soomaaliland ula yeeshay Guddoomiyaha Aqalka Sare ee BFS Mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi